Misoro yeNhau, 10 Gunyana 2019
Chipiri 10 Gunyana 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Gunyana 10, 2019
Madzimambo edzinza revaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, achitungamirwa naMambo Katizagombo, anoti hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwaVaMugabe sezvo hurumende, ichitungamirirwa naVaEmmerson Mnangagwa, yave kutungamira zvose zvose zvichaitwa pakuvigwa kwavo.
Misoro yeNhau, Muvhuro Gunyana 09, 2019
Mhuri yevaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe yasimuka nhasi mangwanani yakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavo, uyo unotarisirwa munyika nemusi weChitatu, kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Gunyana 05, 2019
Mhirizhonga inoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Nhasi tiri kuenderera mberi tichinzwa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 04, 2019
Mhirizhonga inoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Tichanzwa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Gunyana 03, 2019
Mhirizhonga yoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro Gunyana 02, 2019
Mune mamwe maguta muSouth Africa hamuna kumira zvakanaka nenyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 30, 2019
Mapurisa ekuMashonaland West anorambidza MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa kuratidzira munzvimbo nhanhatu mudunhu iri.